असार १९, २०७५ सुनिता बराल
करिब ४० संस्थान सञ्चालनमा छन् । सरकारले विभिन्न समयमा फरक–फरक उद्देश्यसाथ सार्वजनिक संस्थानहरू स्थापना गरेको पाइन्छ । यस्ता संस्थानको उद्देश्य सार्वजनिक हित र कल्याणका दृष्टिले जनताको मन जित्नेगरी दक्षतासाथ सञ्चालन गर्नु हो । अधिकांश संस्थानहरू सरकारी अनुदानमा नै भर पर्ने गरेका छन्। राज्यको संरक्षण सहितको एकाधिकारमा पनि संस्थानहरूको वित्तीय सक्षमता र व्यावसायिक कार्यकुशलता राम्रो देखिएको छैन । सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरणमा पुर्‍याउने एउटा ठूलो आन्तरिक रोग यो पनि हो ।
सार्वजनिक संस्थानका सेवाको बजार माग अत्यधिक रहँदारहँदै पनि प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रदान गर्नसकेका छैनन्। अर्कोतर्फ संस्थानहरू घाटामा रहनाले सरकारले आर्थिक बोझ बेहोर्नुपर्ने बाध्यता छ । आखिर किन यस्तो हुन्छ ? माग बढी भएपछि त उत्पादन र आपूर्ति बढाउनुपर्ने होइन र ? किन सधैं घाटामा रहने ? यसमा प्राविधिक पक्ष अन्य पनि भेट्टाउन सकिएला, तर प्रमुख पक्ष भने नेतृत्वको विषय हो ।
संस्थानका प्रमुखहरूमा हुने गरेको राजनीतिक नियुक्ति यसको कारण हो । सरकार बदलिएसँगै परिवर्तन हुने राजनीतिक नियुक्तिका पदहरू आफैमा गलत नहोलान् । तर यस्ता नियुक्तिमा दक्षता, सम्बन्धित क्षेत्रप्रतिको विशेषज्ञता विचार नगरी गरिने सिफारिसका अभ्यास भने गलत छन् । यस्ता संस्थानमा जबसम्म यो जागिरमात्रै होइन, यो सामाजिक उत्तरदायित्व हो भन्ने मनोभावनासाथ कार्ययोजना भएको व्यक्ति जाँदैनन्, तबसम्म यो समस्या कायम रहन्छ । सरकार मातहतमा रहँदा अत्यधिक नियन्त्रण हुने र निजी क्षेत्रलाई दिँदा बढी नाफामुखी मात्रै हुने भएकाले छुट्टै कानुन निर्माण गरी लोककल्याणकारी संस्थाका रूपमा विकसित गर्नुपर्छ यी संस्थानहरूलाई।